Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Bookmarks on iPad
> Resource > iPad > Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Safari Bookmarks on iPad
Si kasta oo ay u soo kabtaan Bookmarks Safari ka iPad ah?
Waxaan si qalad ah la tirtiro Bookmarks aan ka Safari on my mini iPad, oo kulligood wada ahaa, oo ku saabsan 200 wadar ahaan. Aad ayaan u murugaysnaa oo arrintan ku saabsan. Waxaan la doonayeen inay ku tirtiray taariikhda. Sida muuqata, waxaan tirtiray folder bookmark lahayd. Sidaas doqon! Aniguna ma awoodo in ay iyaga lumin, maxaa yeelay in badan oo iyaga ka mid ah waxaa la xiriira shaqadeyda oo waxaan iyaga maalin walba loo isticmaalo. Fadlan iga caawiyaan iyaga dib ugu heli lahayn. Thanks badan!
Khasaaraha Data dhaca ku dhawaad ​​maalin kasta, xitaa saacad kasta. Haddii aad iyaga u maareeyeen in hab sax ah, waxaad si fudud u badbaadiyaan kartaa xogta hore. Sida ay u Bookmarks ku ah iPad (iPad Pro, iPad mini 4, iPad mini, iPad bandhigay isha, iPad cusub ama iPad 1, iPhone 6S Plus, iPhone 6S), waxaa jira ugu yaraan saddex dariiqo oo aad isku dayi kartaa in dib u soo ceshano Bookmarks aad tirtiray Safari, iyadoo la isticmaalayo iCloud, Lugood iyo iPad.
Habka ugu horeysay: celin iPad Bookmarks ka iCloud aad
Haddii aad leedahay xisaab iCloud ah, waxaad isku dayi kartaa sidan sida isku marka hore. Marka aad ogaaday in aad la tirtiro xogta qaldan, oo aad ku dhacay haysaa xogta ku kaydsan aaladaha kale ee Apple aad, fadlan dami Internet isla markiiba si ay u joojiyaan .Wadashaqayntaas si toos on aaladaha Apple oo dhan. Tag ka iPhone, iPad ama iPod xiriiri kale, iyo soo celinta ay gurmad ka iCloud. Markaas waxaad u tagi kartaa internet-ka iyo nidaamka xogta si aad iPad meesha aad badiyay Bookmarks ah.
Habka labaad: celin iPad Bookmarks ka Lugood aad
Haddii aad synced aad iPad la Lugood dhawaan, waxa kale oo aad isku dayi kartaa in la soo celiyo aad iPad kaga imaanayo Lugood ah. Ka hor inta aadan tan sameyn, hubi in aad naafo auto-.Wadashaqayntaas ka hor, si gurmad Lugood ee aan la cusbooneysiiyaa. Markaas waxaad si fudud u soo celin karo.
Habka saddexaad: kabsado Bookmarks lumay ka iPad
Labada siyaabaha kor ku xusan masixi doono wixii xog jirta oo dhan on your iPad. Haddii aadan rabin, waxaad isku dayi kartaa sidan. Si aad u soo kabsado Bookmarks Safari ka iPad ah sidan, waxaad u baahan tahay in ay ku tiirsan yihiin qalab kabashada dhinac saddexaad: Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery) (Windows), ama Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Mac iPhone Data Recovery) , kaasoo u ogolaanaya in aad ka bogsato tirtiray Bookmarks si toos ah uga dhan iPads. Waxaad sidoo kale isticmaali kartaa Macdan aad gurmad Lugood si aad u hesho xogta ka aan laga badinin xogta aad hadda ku iPad.
Next, aynu rakibi Wondershare Dr.Fone ee macruufka on your computer iyo u isticmaalaan si ay u soo kabsadaan Bookmarks iPhone in tallaabooyinka wada. Users Mac karaa download version Mac in ay qaadaan tallaabooyinka la mid ah.
Talaabada 1: Isku iPad si aad u computer
Orod barnaamijka on your computer ka dib markii ay ku rakibidda. Connect aad iPad, oo waxaad heli doontaa interface sida soo socota. Waxaa jira laba siyaabood oo aad doorato, waayo, ka soo kabsado Device macruufka iyo soo kabsado Lugood ee kaabta File. Si toos ah iskaan oo ka soo kabsado iPad, ee ka dooro mid hore iyo sii.
Windows aad arki doonaa ka dib markii isku xira iPad la isha bandhigay, mini iPad, iPad cusub ama iPad 2.
Suuqa ayaa aad arki doonaa haddii aad ku xiran iPad 1. Halkan waxa aad u baahan tahay inaad kala soo baxdo ka siib-in marka hore.
Fiiro gaar ah: Haddii aad rabto in aad Macdan aad gurmad Lugood, waxaad dooran kartaa habka soo kabashada kale, ka soo kabsado Lugood ee kaabta File. Markaas dooran aad gurmad oo soo saaro. Waa mid aad u fudud.
Talaabada 2: baarista iPad u Bookmarks
Next, aad si toos ah u riixi kartaa Start Scan ku furmo suuqa ugu weyn ee iPad (iPad 1 saaray) si ay u iskaan. Haddii aad isticmaasho iPad 1, aad u baahan tahay si aad u hesho hab iskaanka aad iPad sida ay tallaabooyinka hoos ku qoran:
Hay iPad iyo riix Start.
Marka aad hesho hab iskaanka ah. Software wuxuu ku bilaabmaa aad ka baareyso iPad xogta laga badiyay.
Talaabada 3: Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh & kabsado Bookmarks iPad
Scan ka dib, waxaad ku eegaan karo oo dhan Bookmarks iPad aad ee qaybta ka ah Safari Bookmark. Waxaad calaameysaa kuwa aad rabto in aad soo kabsadaan oo guji Ladnaansho iyaga badbaadiya aad xisaabinayo mid ka mid click.
Fiiro gaar ah: Macluumaadka halkan helay waxaa ka mid ah macluumaadka la tirtiray iyo kuwa hadda on your iPad. Haddii aad rabto in aad dib oo kaliya kuwa aad tirtiray, waxaad nadiifin kartaa natiijada scan adigoo isticmaalaya button slide ee ugu sareysa si ay u soo bandhigaan waxyaabaha kaliya tirtiray.